Gudiga EACC oo sheegay inuu dhaqangelinayo warbixin ku saabsan hanti dhowrka oo la soo saaray
Gudiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC ayaa sheegay inuu dhaqangelinayo waxyaabaha ku qoran warbixin la soo saaray oo la xariirta hanti dhowrka.
Gudoomiye ku xigeenka gudigan Sophia Lepuchirit ayaa ka dhawaajisay inay tallabo ka qaadayaan cid kasta oo lagu eedeyay inay wax isdaba marin sameysay sida lagu xusay warbixin diirada lagu saameyay hanti dhowrka sanadiihii 2015-kii iyo 2016-kii.
Hanti dhowraha guud ee dalka Mr. Edward Ouko aya shaaca ka qaaday in baaritaano la sameeyay lagu ogaaday inuu musuqmaasuq hareeyay ismaamulada kala duwan ee dalka.
Gudoomiye ku xigeenka gudiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC ayaa sheegtay inay jiraan qaar ka mid hogaamiyaasha maamul goboleedyada oo mudo kooban isu bedelay milyaneera sidaas awgeedna hantidooda baaritaan lagu sameynayo.
Ms Lepuchirit ayaa dhanka kale ka dhawajisay in ismaamulada qaar aysan ilaalinin shuruucda u degsan soo iibsashada qalabka maadama sida ay hadalka u dhigtay ay jiraan wax isdaba marin, lunsasho lacageed iyo laaluush la qaadanayo.
← Fida asks Uhuru Kenyatta to appoint 7 women to the Cabinet
Xildhibaanada baarlamaanka oo maanta turxaan bixinaya sarakiisha ku biiraya golaha EALA →